ATECC608: modul nchekwa nke utu Pi | Akụrụngwa n'efu
na Ọrụ IoT Ha na-ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu na ndị ọkachamara dabere na bọọdụ mmepe dị ka Arduino ma ọ bụ nke ha SBC Utu Pi. Nchebe na oru ndị a bụ isi, ebe enwere ike ibuso ha agha ma ọ bụ gbanwee ọrụ ha ma ọ bụrụ na enwere nsogbu. Nke ahụ bụ nchegbu ATECC608 na-abịa iji dozie.
Ruo ugbu a, e nwere ọtụtụ modul na ihe dị iche iche iji mepụta ọrụ nke ụdị ọ bụla, mana ole na ole gbadoro ụkwụ iji mee ka nchebe ruo mgbe mmewere nke a ụlọ ọrụ Microchip, onye ama ama ama ama nke ngwaahịa dika PIC microcontrollers ya.
1 Banyere ATECC608
1.1 Njirimara teknụzụ nke ATEC608
Ọrụ ahụ ATECC608 na-enye gị ohere ịgbakwunye Microchip nche chip gị Raspberry Pi, nke mere na ọ nwere ike ichebe gị IoT imewe megide nkịtị na ime ọgụ. Na mgbakwunye, modul ahụ pere mpe, ma dịkwa mfe jikọtara ya na Rasbperry Pi, na mgbakwunye inwe ọnụahịa nke naanị $ 10.
ATECC608 dị oke mfe iji, ị dị nnọọ nwere jikọọ ya na utu Pi na-eso ya ngwa ngwa ndu na ị ga-ahụ na nke a Adreesị GitHub. Mgbe nke ahụ gasị, ọ dị njikere iji ihe atụ Python dị na Microchip GitHub na ị ga-ahụ na njikọ njikọ ọzọ a. Ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ụdị ya, ọ bụ ihe mepere emepe (CERN OHL v1.2).
Maka ndị na-amaghị, CERN OHL ma ọ bụ Open Hardware License bụ ikike imeghe emeghe emere maka ọrụ ngwaike. Ọ bụ CERN mepụtara ya ma bipụta ọtụtụ nsụgharị, dịka v1.2 a nke bụ nke ikpeazụ edegharịrị na 2013.
Ihe nile eji teknụzụ Microchip hazie, mana haziri ya Companylọ ọrụ French mgbach ma kee OTS Nche.
La echiche bụ na ọ na-amalite na-ewu ewu iji kpuchido ọrụ IoT na Raspberry Pi, iji njikọ dị nchebe na TLS, mgbochi cloning, PKCS11 Token, wdg.
Njirimara teknụzụ nke ATEC608
Maka ozi ndị ọzọ na ATECC608, kwuo na ị nwere ihe ndị a atụmatụ:
Izo ya ezo co-processor na ala ngwaike nchekwa nchekwa.
Nchekwa nchekwa ruo igodo 16, asambodo ma ọ bụ data.
ECDH FIPS SP800-56A Elliptic Curve Deffie-Hellman, usoro ntinye aha nke na-enye ohere ka ndị ọzọ nwere ọnya elliptik nke igodo ọha na eze, iji mepụta nzuzo nzuzo na ọwa na-enweghị nchebe.
NIST P256 kwadoro
SHA-256 na HMAC hash
AES-128 ka izo ya ezo ma mechie ya
Ndabere azụ ATECC508
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » ATECC608: usoro nchekwa maka Raspberry Pi